USindiswa - Amaphakethe we-Beroean - Umbuyekezi we-JW.org
Zonke Izihloko > Insindiso
Ngabe amaKhristu akuqala ayenethemba lokuvuselwa emhlabeni noma ukuvuselwa ezulwini? Kwabhalwa Imibhalo YamaKristu Okuqala. Izindatshana eziyisithupha zokuqala kulolu chungechunge lwe "Ithemba Lesintu Ngekusasa. Lizokuba kuphi?" kubuyekezwe ubufakazi obutholakala emiBhalweni ...
Izimfundiso Nenkolelo YabaPhostoli UKristu wayekholelwa embuzweni othi “Ithemba lesintu nge ...
UJan 22, 2019
UJan 9, 2019
Insindiso, Ingxenye 5: Izingane ZikaNkulunkulu
Iyiphi indima edlalwa Yizingane zikaNkulunkulu ekusindisweni kwesintu? Iyini "imfundiso yethuba elilodwa" yensindiso futhi kungani ifundiswa kabanzi? Ngabe uNkulunkulu unikeza wonke umuntu ithuba elilinganayo lokusindiswa?
Insindiso, Ingxenye 4: Bonke Emndenini
I-athikili edlule ibikhuluma ngezimbewu ezimbili eziyizimbangi eziphikisanayo phakathi nesikhathi kuze kube sekuvuthweni kosindiso lwesintu. Manje sesisesitolimeni sesine salolu chungechunge kepha asikaze sime ukubuza lo mbuzo: Yini ...
Septhemba 7, 2016
Ngakhuliswa nginguFakazi KaJehova. Sengicishe ngibe ngamashumi ayisikhombisa manje, futhi phakathi neminyaka yokuphila kwami, ngisebenze kumaBethel amabili, ngaba neqhaza emisebenzini eminingi ekhethekile yaseBethel, ngasebenza njengesidingo esikhulu emazweni amabili akhuluma iSpanishi, ukhuluma e ...
Insindiso, Ingxenye 3: Imbewu
Ngubani owesifazane okuGenesise 3:15? UNkulunkulu wabubeka kanjani ubutha phakathi kwakhe noSathane? Kungani aprofetha ngokwakhiwa kwemigqa emibili yenzalo futhi ngobani laba?
Kule ndatshana yesibili ochungechungeni lwe- “Insindiso Yethu”, sibuyela emuva ekuqaleni ukuze siqonde ukuthi yini elahlekile bese sithola umqondo wokuthi insindiso ifaka ini.
Insindiso, Ingxenye 1: Isakhiwo Esingasekelwe Emibhalweni
Lo mbhalo wokuqala ochungechungeni lwe- “Insindiso Yethu” uhlola ukuthi ngabe kunesisekelo esingasekelwe eBhayibhelini sokukholelwa ekusindisweni kwesintu.